HDPE Sodina asa fanadiovana y Floater - China Ningbo Sunplast Sodina
Hdpe asa fanadiovana y Sodina
HDPE Gas Sodina
Hdpe Water Sodina
Hdpe Sodina Fittings
Famatrarana PP Fittings
Hdpe Sodina asa fanadiovana y Floater
Hdpe Sodina Welding Machine
Hdpe Sodina Butt Fusion Welding Machine
Hdpe Sodina Electrofusion Welding Machine
Hijery ny bika rehetran'ity HDPE Butt Fusion Flange
Steel ny fanampian'Andriamanitra Rings
HDPE Butt Fusion 90 Degree kiho
HDPE Butt Fusion 45 Degree kiho
HDPE Butt Fusion 22.5 Degree kiho
HDPE Butt Fusion Ny Cap
HDPE Butt Fusion fampihenana Tee
HDPE Repair lasely
HDPE Electrofusion Equal anankiray efa voavitrana
HDPE Electrofusion 90 Degree kiho
HDPE Electrofusion 45 Degree kiho
HDPE Electrofusion fampihenana ny Tee
HDPE sodina asa fanadiovana y floater, atao amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo ara-nofo amin'ny hakitroky polyethylene tsara manovaova, feno hery avo polyurethane sombin-javatra, UV-porofo fananany tamin'ny fampisehoana tena tsara, avo buoyancy, mora installtion. Contact us tanteraka, raha liana ianao amin'ny asa fanadiovana y HDPE sodina floaters !!
Supply Fahaizana: 3 × 40ft fitoeran isan-kerinandro
Port Of Fiaingana: Ningbo na Shanghai
Fandoavam-bola Terms: T / T na hentitra no tsy miovaova LC amin'ny fahitana
Fanaterana ny fotoana: Miankina amin'ny dia be ny filaminana.
Ny HDPE floater sodina vita amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo ara-nofo amin'ny hakitroky polyethylene tsara manovaova, feno hery avo polyurethane sombin-javatra ao anatiny. Amin'ny mahay mandanjalanja tsara rafitra sy ny fampisehoana, ny sodina floater lasa ny tonga lafatra fanoloana ny nentim-paharazana vy floater ny asa fanadiovana y mitsinkafona fantsona.
No. Structure Name Material
2 Fenoy Material Closed-efitra Polyurethane sombin-javatra
3 Steel horonan Nandrisika karbaona vy na 304 Stainless vy
※ akorany ny ivelany dia novolavolaina miaraka amin'ny fitaovana sy ny sisa MDPE tsara mikasika ny Fahasarotana, divulsion fanoherana & dona fanoherana dia azo antoka.
※ UV-porofo fananana dia nanampy tao amin'ny peucine hiaro ny akorandriaka avy ao amin'ny fahavoazana ny tontolo iainana sy ny fanovana mari-pana ambany.
※ Amin'ny sarobidy ny buoyancy, ny vatana mitsingevana manao tsara, rehefa tojo onja, rivotra na fitokonana avy amin'ny sambo.
※ MDPE vatana dia fahazavana ary mety hametraka & transfer.settlement ny faladiany, ny fahaizana adaptive dia mahery dia mahery, tsara aseismic fampisehoana.
※ ny mitsingevana tontolo tena sariaka ary azo amboarina.
Dia Floater Inner.
(mm) Dia Floater ivelany.
(mm) Floater ivelany Shell hateviny
(Mp / Miaraka tsiroaroa)
Fanamarihana: Ny fepetra arahana ao amin'ny lisitra dia izay ananantsika amin'izao fotoana izao ny haingokaingony. Custom-nanao fepetra arahana misy
Previous: SPH160 hydraulic Butt Fusion Welding Machine
Manaraka: PP Clamp Sddle
Sunplast, ny alalan 'ny 15 taona fampandrosoana, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe iray amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy mpitarika ny hdpe sodina (Poly sodina) rano sewer & drainage ao Shina. Ny orinasa dia nampiditra maro mandroso ny teknolojia sy ny fitaovana ao anatiny. Mba ho afaka ny hividy ny vidiny ambany toetra sy ny vokatra vita avy any Shina amintsika.
asa fanadiovana y float
asa fanadiovana y Floater
Sodina asa fanadiovana y float
Sodina asa fanadiovana y Floater
HDPE Sodina Floater
Ningbo Sunplast Sodina Co., Ltd
Basic Info. Connection: Welding Structure: mitsangana malefaka sy henjana: malefaka Material: PE Malagasy: Standard Gas Sodina Fittings fanamboarana: HDPE famantarana: SUNPLAST-sodina Transport Package: Ctns famaritana: DN25-DN400 ori ...
Famatrarana mety tsara - barahina mety tsara - Plumbing mety tsara (Equal Tee)